Inona no mahatonga ny fanafihana alika? | Tontolo alika
Ny alika, toy ny olona, ​​dia mety harary. Ny aretina maro dia toy ny an'ny olombelona, ​​toy ny fanintona. Izy io dia traikefa tsy mahafinaritra izay mamela anao tsy hanana hery manoloana ny fijalian'ny alika, tsy fantatra izay hatao na ny fomba hanampiana azy tsy hiverina intsony. Na izany aza, amin'ny tranga sasany dia tsy azo ihodivirana izany. Noho izany, ny fahalalana an'io olana io dia hanampy anao hiatrika izany sy hanohana ny biby fiompinao.
Eny eny te hahafantatra izay mitranga amin'ny alikao ianao rehefa voan'ny fanintona, inona no hatao, inona no tsy, jereo ny zavatra nomaninay ho anao.
1 Inona ny fanintona
2 Antony fanintona
2.2 Aretina metabolika
2.3 Malformation hatrany am-bohoka
2.5 fanaintainan'ny atidoha
3 Alika ny dingana mandreraka
3.1 Dingana voalohany, na dingana mialoha ny tapaka lalan-dra
3.2 Dingana faharoa, na dingana tapaka lalan-dra
3.3 Dingana fahatelo, na dingana aorian'ny tapaka lalan-dra
4 Ahoana ny fomba hahazoana diagnostika
5 Fitsaboana ny fanintona alika
6 Inona no hatao (ary inona no tsy) fanintona amin'ny alika
6.1 Ny tokony hataonao
6.2 Izay tsy tokony hataonao
Inona ny fanintona
Azontsika atao ny mahatakatra ny fisamborana ho olana eo amin'ny haavon'ny ati-doha izay mitranga satria misy fiasa elektrika avo lenta, izany hoe mihombo ny neurônina ary manomboka mamorona toera-pientanam-po mijanona, izay miteraka io fikorontanana io. Mazava ho azy, mety hitranga ihany koa fa misy ny fanakanana ireo neurôna ireo, izany hoe tsy mandeha izy ireo. Ary izany rehetra izany no mahatonga ny atidoha dia mandefa dona amin'ny herinaratra amin'ny vatana iray manontolo, noho izany ny fanafihana nihatra tamin'ny alika.
Araka ny efa nolazainay teo aloha, tsy toe-javatra mahafinaritra no mampatahotra anao, mainka ny alikao. Izany no antony maha-zava-dehibe ny, alohan'ny fanafihana voalohany, mankanesa any amin'ny mpitsabo aretin-tsaina ianao mba hialana amin'ny olana lehibe kokoa.
Ny famonoana alika dia tsy tena famantarana ny zavatra iray. Raha ny tena izy dia antony na aretina io, izay mety ho azy irery, na anisan'ny soritr'aretina vokarin'ny aretina hafa. Ilaina izao fantaro ny antony mahatonga azy ireo hitranga, ary ireto avy ireto:
Iray amin'ireo olana matetika indrindra io ary misy ifandraisany indrindra amin'ny fanintona. Raha ny marina dia maro no mifandray amin'ny epilepsia amin'ny fisamborana, tsy firaharaha ny antony hafa toa ireo izay ho hitantsika etsy ambany.
Epilepsy amin'ny alika afaka miseho manomboka amin'ny 6 volana ka hatramin'ny 5 taona. Ny iray amin'ireo soritr'aretina dia ny fanintona, nefa azonao atao ihany koa ny manidina, tsy mahatsiaro tena, tsy mahazo fiofanana amin'ny kabine (toy ny fahalavoana na fivalanana), sns.
Rehefa mijaly noho ny olana amin'ny taova ny alika dia mety hiseho ihany koa ny fanintona. Miresaka fijaliana, ohatra, isika hépatite, hyperthermia, hypocalcemia ... Izany no antony maha-zava-dehibe ny fitsapana ra.
Malformation hatrany am-bohoka
Betsaka ny tsy fetezana, fa ny be mpahalala sy be mpahalala indrindra dia antsoina hoe hydrocephalus, izay fitomboan'ny tsiranoka cerebrospinal ao amin'ny ati-doha manala ny fako amin'ny rafi-pitatitra. Aretina izay misy fiantraikany amin'ny alika kely kely indrindra, toy ny Yorshire Terrier, pomeranian, poodle, maltese ...
Ny kapoka mafy dia mafy eo amin'ny loha dia mety hahatonga ny alikanao ho voan'ny fanintona noho ny vokany maro. Noho izany dia ilaina ny, raha ny antony mahatonga azy ireo dia izao kapoka izao dia mankanesa any amin'ny mpitsabo biby ianao, vao mainka aza toa tsy tapitra mihitsy ny fanjakana.
ihany koa fantatra amin'ny hoe meningite, Miresaka momba ny fiakaran'ny vidin'ny ati-doha isika, ary saika misy ifandraisany amin'ny aretina virtoaly. Ohatra, mety hateraky ny distemper, toxoplasmosis, na erlichiosis izany, ka izay no antony anaovana vaksiny alika hiarovana azy ireo.
Ny fivontosana ao amin'ny ati-doha dia iray amin'ireo diagnostika ratsy indrindra ho an'ny alika, satria ny vongan'io faritra io dia mety hahatonga ny biby ho very ati-doha ary, miaraka aminy, dia voan'ny areti-maso, olana mandeha, mifehy ny sphincters, sns.
Rehefa mihinana zavatra tsy tokony ho izy ny biby dia mankamin'ny vavony ny aretina. Na izany aza, misy ny azo antoka akora simika mety hisy fiatraikany amin'ny ati-doha. Miresaka, ohatra, izahay amin'ny famonoana bibikely, antifreeze amin'ny fiara, cyanide ...
Izay rehetra mety hiteraka olana eo amin'ny biby, ary hiseho ny fanintona.
Antony iray hafa mahatonga ny fanintona dia ny lozam-pifamoivoizana. Ireo dia mitranga satria, amin'ny fotoana iray dia tsy ampy ny famatsian-dra tonga amin'ny ati-doha, izay miteraka tsy fahombiazan'ny ati-doha, ankoatry ny haavon'ny kardia.
Ohatra iray amin'ity olana ity dia ny rà mandriaka na kapoka. Ary, mazava ho azy, ny fanintona dia mety hahatonga azy ho mendrika ny fisian'ny.
Alika ny dingana mandreraka
Ny famonoana olona, ​​na eo aza ny fisehoan-javatra tampoka, dia manana andian-dingana maromaro amin'ny toerany, ka ny fandinihana ny alikanao dia mety hahatonga anao handeha sy hanampy ny biby fiompinao alohan'ny hitrangan'izany.
Amin'ny ankapobeny, ny fisamborana dia mizara ho dingana telo:
Dingana voalohany, na dingana mialoha ny tapaka lalan-dra
Mety haharitra ora maro na andro izany. Ny zavatra ho tsikaritrao dia ny alikao manomboka mihetsiketsika tsy misy antony manokana, ankoatry ny fihetsika hafahafa. Mety ho hitanao koa fa manana rora be izy, tsy mifandamina tsara izy, misavoritaka sns.
Dingana faharoa, na dingana tapaka lalan-dra
Io no ampahany ratsy indrindra amin'ny fanintona satria mety maharitra segondra vitsy ka hatramin'ny minitra maromaro. Amin'ity dingana ity dia tsy hahatsiaro tena intsony ilay alika ary hianjera amin'ny tany, hanomboka handresy lahatra. Zava-dehibe ny fifehezana ilay biby mba tsy handratra tena, ary koa mba tsy hitelina ny lelany, fa mahazatra ny biby ny mimi, mivoaka na mandoa mihitsy. Aza raisina izany.
Dingana fahatelo, na dingana aorian'ny tapaka lalan-dra
Vantany vao tapitra ny fisamborana dia tsy tapitra izany. Ny zavatra mahazatra dia mifoha mangetaheta be ilay biby, ary tsy misaina vetivety izy, miaraka amin'ny fangovitana, matahotra mihitsy aza. Indraindray mety hitera-doza hafa, toy ny fahajambana, fikorontanana, tsy fifandanjana sns.
Amin'izay fotoana izay dia mety ny itondranao azy ny rano ary avelao hisotro izy, nefa tsy mandeha amin'ny sambo, mba tsy handoa. Andramo ihany koa ny manafosafo azy satria matahotra sy matahotra izy. Aza terena hanao zavatra izy fa mila mandeha tsikelikely vao sitrana.
Ahoana ny fomba hahazoana diagnostika
Rehefa manamarina alika fanintona dia zava-dehibe izany fantaro aloha ny tantaran'ny fitsaboana ny biby. Na dia, raha azo atao, ny razany koa, satria afaka mitaona azy izy ireo. Ny fahalalana amin'ny fotoana rehetra ny zava-nitranga talohan'ny fisamborana dia hanome fampahalalana tena sarobidy ho an'ilay mpitsabo biby satria hanondro ny làlana tokony harahina.
Amin'ny ankapobeny dia tanterahina izy ireo fitsapana ny neurolojia hanombanana ny toetran'ny biby, ary koa fitsapana ra, tsiranoka cerebrospinal, sns. Miaraka amin'izany, ny taratra X, ny MRI, ny EEG, ny fitiliana CT ... dia mety ho fanandramana hafa izay manampy ny matihanina hamantatra hoe inona ny olana amin'ny fanafihana alika.
Fitsaboana ny fanintona alika
Miankina amin'ny antony mahatonga ny fanintona amin'ny alika, ny fitsaboana dia ho fomba iray na hafa. Amin'ny ankapobeny, raha misy ifandraisany amin'ny aretina ny fanintona dia ara-dalàna raha omena fanafody ianao hifehezana izany olana izany ary tsy hiverimberina ny fanintona. Sahabo ho 80% ny alika no mazoto mandray tsara an'io ary tsy misy vokany izany.
Mazava ho azy, ny fanafody voatondro dia tsy maintsy tazomina rehefa mandeha ny fotoana, ary aza adino velively ny manome azy izay ilainy toy ny hoe najanona tampoka na tampoka ny fitsaboana, dia mety ho matotra kokoa ny vokany. Amin'ity tranga ity, ny fametrahana fanairana amin'ny findainao na amin'ny kalandrie dia afaka manampy anao hanadino azy io mihitsy.
Raha aorian'ny fitsaboana herintaona dia tsy misy fanafihana ao anatin'ny herintaona dia azo ahena tsikelikely ny fatra mandra-pijanon'ilay fitsaboana. Na izany aza, amin'ny karazana alika sasany dia asaina manohy miaraka aminy na eo aza ny fotoana.
Ok izao rehefa antony hafa no mahatonga ny famonoana olona, avy eo dia ilaina ny mampihatra karazana fitsaboana hafa, izay mety ho fitsaboana, fandidiana ...
Raha misy manokana ny fanintona, raha toa ka hialana izay nahatonga ny fanafihana dia azo fehezina tsy mila fitsaboana hafa.
Inona no hatao (ary inona no tsy) fanintona amin'ny alika
Rehefa miatrika an'ity scenario ity ianao dia afaka manampy anao hiatrika an'io fotoana tsy milamina io ny fahalalana tsara izay hatao. Noho izany, eto izahay dia hamela anao ny tokony hataonao, ary ny tsy tokony hatao, raha voan'ny tazo ny alikanao.
Ny tokony hataonao
Ambonin'ny zava-drehetra, mitonia hatrany. Tsy hanampy anao amin'ny biby fiompinao ianao raha matahotra. Hisy fotoana amin'izany. Ny tokony hataonao dia miaina fofonaina lalina ary esory izay karazana zavatra ao amin'ilay alika izany dia eo akaikin'ny alika ary mety handratra azy.
Miezaha mba tsy hitelina ny lelany na ho sempotra izy, fa aza manao zavatra hafa. Mila miandry fotsiny ianao handalo ny krizy.
Raha vantany vao vita dia andramo ento any amin'ny toerana misy rivotra sy mangatsiatsiaka ny alikanao. Ary raha vao sambany io, ento any amin'ny mpitsabo biby izy.
Izay tsy tokony hataonao
Etsy ankilany, misy zavatra maro izay tsy tokony ataonao, ary izy ireo dia:
Aza raisina ilay alika. Tsy hisakana azy tsy hihontsina akory ianao amin'ny fisamborana azy fotsiny. Raha ny marina dia mety handratra anao izany raha manao izany. Noho izany, tsara kokoa ny mamela toerana.
Aza atao mametraka zavatra eo amboniny, afa-tsy ny manome hafanana azy. Izany koa dia mandeha amin'ny lamba firakotra, lambam-pandriana ...
Aza omena fanafody azy raha tsy dokotera mpitsabo no nandefa azy, mety tsy hamokatra izany.
Raha sendra fanintona dia aza avela irery. Na dia mampanaintaina aza ny mahita azy toy izao dia mila fantany fa eo anilany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Inona no mahatonga ny fanafihana alika?
Beatrice Uceda dia hoy izy:
Salama maraina, mandraisa alika kely 1 taona 6 volana araka ny voalaza, tonga aho 4 andro lasa izay fa manana fiam-pitiavana be amiko izy, be loatra, matory sy miara-misakafo amiko izy saika tsy manala azy kely manana fananana, farany alina nahavoa azy, ny fahirano azy Naharitra 6 minitra teo ho eo, androany natahotra aho, ary nony alina dia nanafika ankizy iray aho, ny zanak'anabaviko monina eto aminay, mamelona azy izy, mamono azy, fantany izy tsy fantatro ny antony nanafihany azy. Azo atao ve ny manintona anao amin'ny karazana fikorontanan-tsaina ka tsy fantatrao ny olona ao amin'ny fianakavianao? Roa isan-kerinandro ihany no nanoratan'izy ireo phenobarbital 100mg? Tsy hitako izay hatao, azafady indrindra noho izay mahazo ny zanako kely, poodle antonony izy.
Valiny tamin'i Beatriz Uceda
Ratsy ve ny fandroana amin'ny hafanana?